कोरोना संक्रमितले कस्तो अवस्थामा अस्पताल जाने ? « Mero LifeStyle
सुमित्रा लुईंटेल	||4May, 2021
डा. रविन्द्र पाण्डे (समिर), जनस्वास्थ्यविद् ।
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै अस्पतालमा बेडको अभाव हुन थालेको छ । यस्तै, होम आइसोलेसनमा बस्नेहरुको संख्या पनि अत्याधिक छ ।
मन्त्रालयको सोमवारसम्मको तथ्यांकअनुसार ५० हजार १ सय ७२ जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन् । तैपनि कतिपय मानिसहरु कोरोना संक्रमण हुने बित्तिकै आत्तिएर अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । यसले अझै संक्रमणको जोखिम निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले यहाँ कस्तो अवस्थामा अस्पताल जाने भन्ने विषयमा चर्चा गरिएको छ ।
अस्पतालमा बेड नभएपछि त्यहाँ गइसकेपछि केही न केही व्यवस्था हुन्छ । साथै, अर्को अस्पतालसँग सहकार्य गरेर भएपनि बिरामीलाई सहज हुने काम हुन्छ ।
विशेषगरी, शरीरमा अक्सिजनको मात्रा ९४ भन्दा कम भएमा, ज्वरो आइरहेमा, अत्याधिक खोकी लागेमा, श्वास फेर्न गाह्रो भएमा वा कुनैपनि किसिमको कठीन समस्या भएमा घरमा बस्नु हुँदैन । अहिले फैलिरहेको नयाँ भेरियन्टले एक्कासी कोभिड निमोनिया गराउँछ । त्यसैले संक्रमितलाई माथिका समस्या देखिएमा नजिकैको कोभिड अस्पतालमा गएर जाँच गर्नुपर्छ । छातीको एक्सरे गर्दा वा सिटी स्क्यान गर्दा फोक्सोमा समस्या देखिएमा चिकित्सकको सिफारिस अनुसार औषधि सेवन गर्नुपर्छ । अवस्था अझ जटिल भएमा अस्पताल भर्ना भएर उपचार सुरु गर्नुपर्छ ।
कतिपय मानिसहरुले चिकित्सकको सल्लाह बिना नै घरमा अक्सिजन लगाएर बसेका छन् । यसरी चिकित्सकको सल्लाह बिना घरमा अक्सिजन लिनु हुँदैन । अक्सिजनमात्र उपचार होइन । अक्सिजनको कमी भए वा श्वास फेर्न गाह्रो भएमा तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ ।
अहिलेको दोस्रो लहरले एक रातमै स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बनाउन सक्छ । त्यसैले हेलचेक्राइँ गरेर घरमै बस्नु हुँदैन । अस्पतालमा बेड नभएपछि त्यहाँ गइसकेपछि केही न केही व्यवस्था हुन्छ । साथै, अर्को अस्पतालसँग सहकार्य गरेर भएपनि बिरामीलाई सहज हुने काम हुन्छ ।
कस्तो अवस्थामा परीक्षण गर्ने ?
– श्वास फेर्न गाह्रो भएमा
– छातीको एक्सरे गर्दा निमोनियाको लक्षण देखिएमा
– एकदम थकाइ लाग्ने
– शरीर दुख्ने समस्या भएमा
– स्वाद तथा गन्ध नआएमा
(डा. पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
#डा. रविन्द्र समिर